ए भगवान काँग्रेसलाई बचाउ कुर्तकबाट !
देश र दुनियाँ धेरै टाढा पुग्यो । समाजको गति तीव्र छ । आकांक्षा पनि तीव्र । पुँजीवादको नतिजा नै यहि हो । केही पनि स्थीर रहन सक्दैन आजको बजारमुखी व्यवस्थामा
पढ्नुहाेस् ऋग्वेदमा विज्ञानका कुरा
पहिलो मण्डल सूर्यको प्रकाश परेको पानी पवित्र (शुद्ध) हुन्छ । शरीरमा पानीले औषधीतत्व स्थिर गराउँछ । शरीरमा शुद्ध पानी भएमा नै शरीर निरोगी हुन्छ । पानीमा अमृत समान गुण हुन्छ
‘प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुली प्रकरण’बाट सिक्नु पर्ने चार पाठ
प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुली प्रकरणबाट सिक्नु पर्ने चार पाठ १. अदालतको राजनीतीकरण: न्यायालयमा देखिएको बेथिती र भद्रगोल अवस्थाको मूल जरो राजनीतीक भागबण्डा र पार्टीगत लगावका आधारमा गरिने न्यायाधीश नियुक्ती नै हो
केही दिनयता सर्वोच्च अदालतमा जे–जस्ता घटना घटित भए, तिनले नेपालको अदालत र समग्र न्याय प्रशासनमा आमूल परिवर्तन हुनुपर्ने मागलाई थप पुष्टि गरेका छन् । नियुक्तिकै समयदेखि गोपाल पराजुलीलगायत केही न्यायाधीशको
हकिङले नर्ससगँ प्रेममा परेपछि श्रीमती त्यागेका थिए
आफ्नो बिरामीपनाका कारण आफूलाई उल्टै लाभ भएको ठान्थे हकिङ; यो रोग लाग्नुपूर्व जीवनदेखि आफूलाई वाक्क लाग्ने गरेको बताउँथे उनी। बिरामी भएपछि उनी निर्विकल्प रूपमा अरूमा आश्रित हुन पुगे। रोग लागेपछिका
बोलीको विकल्प गोली होइन
कैलालीको घोडाघोडी नगरपालिकाका मेयर ममताप्रसाद चौधरीमाथि सोमबार साँझ उनकै निवासमा गोली र खुकुरी प्रहार भएको छ । आक्रमणबाट चौधरी गम्भीर घाइते भएका छन् । चौधरी केही दिनदेखि चर्चामा थिए ।
यी बैंक हुन कि कार्टेल कम्पनी ?
कथित बैंकर्स संघको ब्याजसम्बन्धि नियम नमानेको भन्दै एनआइसी एसिया बैंकसँग कुनै पनि प्रकारको अन्तर बैंक कारोबार नगर्ने सहमति अन्य २७ बैंकले गरेका छन् । आफ्नो कार्टेलिड्डको निर्णय नमानेको भन्दै अन्य
आशा अर्थमन्त्री डा खतिवडासँग
प्रकृति दाहाल समाजबाद उन्मुख संबिधानले गरेको प्रतिबद्धता, मौलिक अधिकार र राज्यका निर्देशक सिद्धान्तले परिकल्पना गरेका गम्भिर बिषयहरु र जनताको जीवनस्तर उकास्नका लागि गर्नैपर्ने हस्तक्षेपहरुमा नयाँ अर्थमन्त्रीले नयाँ निरन्तरताको सुरुवात गनुपर्ने
कान्तिपुरमा दुर्गा कार्कीको लेख : हिंसा विरुद्ध आवाज उठाउन घरैबाट सुरु
भारतीय महिला अधिकारकर्मी कमला भासिनले बारम्बार भन्ने गर्छिन्– ‘पितृसत्ताले जति महिलालाई हिंसा गरिरहेको छ, त्योभन्दा बढी पीडित पुरुषलाई बनाएको छ ।’ पितृसत्ता वा पितृसत्तात्मक सोचजस्ता शब्द सुन्ने बित्तिकै धेरैले निधार खुम्च्याउँछन्